Die Casting Cooker Parts Ary Fitaovana Fitaovana Fako ao An-dakozia - Casting Minghe
Solosaina sy lakozia ho an'ny lakozia amin'ny alàlan'ny fanodinana & Cnc Machining
IATF 16949 CERTIFIED CAST MANUFACTURING SY CNC MACHINING ho an'ny lakozia sy Cooker
Ny fitaovana fandrahoana dia midika fitaovam-pandrahoana. Miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia maoderina dia miova tsy tapaka ny fitaovana ampiasaina amin'ny fitaovana fandrahoan-tsakafo, vy, aliminioma sns, ary maro karazana koa ny fitaovam-pisakafoanana, ao anatin'izany ny mpahandro vary, ny fatana microwave, ny fandrahoana tsindry, lapoaly, sns.
Anisan'ireny, ny lakozia vita amin'ny vy dia azo atao fitaovana manify kokoa noho ny mihodina na nokapohina nefa mitazona tanjaka avo. Azo hafanain'ny hafanana avo be. Ny vy karbonika dia tsy mamindra hafanana betsaka toy ny fitaovana hafa, fa tombony ihany koa ny fampiasana azy io ho wok sy paella: rehefa varahina ny ampahany amin'ny vilany, dia tazonina amin'ny hafanana hafa ny ampahany hafa. Toy ny vy natsipy, ny lapoaly vy dia tokony hafanaina ary hafana alohan'ny hampiasana azy. Menaka sosona (menaka manitra kokoa) ambonin'ilay lapoaly ary apetraho eo amin'ny fatana ny lapoaly hanafanana azy. Rehefa afaka fe-potoana, dia ho lasa mainty ny tampon'ny lapoaly ary ho lasa tsy miraikitra. Ny vilany vy amin'ny karbaona dia matetika ampiasaina amin'ny woks sinoa.
Anisan'izany, lakozia na vokatra an-dakozia maro no mila fanariana maty. Sarotra ihany ny fizotrany. Ilaina ny mandrendrika ny ingot aluminium ho ao anaty rano aliminioma, ary avy eo atsofohy ao anaty masinina manary maty. Rehefa vita ny lasitra dia tsy manana rivet ny vatan'ny vilany. Amin'ny ankapobeny, ny vilany nivelatra sy ny vilany famonoana maty dia manana rivet. Ity koa dia fomba intuitive hanavahana. Hita matetika amin'ny lakozia tsy stick stick eropeana, somary avo ny vidin'ny fizotrany, matevina ny vatan'ny vilany, matevina ny hafanana ary tsy ho simba izy. Amin'ny ankapobeny, ny orinasa lehibe dia mahay mamokatra, ary ampiasaina hanondranana azy ireny matetika.
Ny fampiasana fitaovana avo lenta sy mety indrindra amin'ny fizotry ny famokarana, ampiarahina amin'ny famaranana ny lahatsoratra tsirairay vita tanana, dia manome antoka ny kalitaon'ny vokatra Minghe Die Casting mandritra ny fotoana lava vahaolana tonga lafatra amin'ny fandrahoana sakafo mahasalama sy ara-tsakafo (tsy misy tavy) ary mora diovina.
Mifandraisa amin'ny injenieran'ny lakozia sy Cooker anio mba hiresaka momba ny mombamomba ireo tetikasanao sarotra.
1. Fampiharana an-dakozia sy lakozia mahazatra matetika.
Ny traikefan'i MINGHE dia tsy manam-paharoa amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny fanamboarana vahaolana maty ho azy ary ny fametahana machining cnc ho an'ny karazan-tsakafo Kitchenware And Cooker marobe, ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny:
2.Nahoana no mifidy anay amin'ny tetik'asa momba ny lakozia sy ny lakozia
Minghe dia manana traikefa 35 taona mahery manampy ny mpanamboatra cabint fampisehoana famolavolana singa mekanika mahomby. Rehefa miara-miasa amin'i Minghe ianao dia afaka mahazo ireto tombony manaraka ireto amin'ny fizotrantsika fanariana faty:
Ny asan'ny casting casting an'i Minghe dia misy milina fanodinana 40 manomboka amin'ny 250 ka hatramin'ny 3000 taonina. Izahay dia mandray ny sasantsasany amin'ireo hazakazaka cabint fampisehoana tena ilaina amin'ny resaka habetsahana, haben'ny ampahany ary ny fahasarotana. Noho ny fahaizanay momba ny injeniera sy ny maodely dia fantatry ny mpanjifanay aminay ho toy ny orinasa afaka mampihena ny fahasarotana amin'ny ampahany izahay ary hahatonga ny fizotran'ny fanamboarana hahomby kokoa.
Minghe dia afaka manampy amin'ny fampifangaroana ny rojom-panomezanao amin'ny alàlan'ny fanolorana ny fonosana serivisy fanariana maty ankoatry ny fanohanan'ny injeniera, ny famolavolana lasitra ary ny famahana olana, ny milina ary ny lojika.
Minghe dia ISO Certified Die Casting Manufacturer ary manana traikefa betsaka amin'ny famolavolana sy ny famokarana zinc sy ny aliminioma amin'ny famaritana kalitao ao amin'ny Kitchenware And Cooker.
Miaraka amin'ny milina fanontam-pirinty manomboka amin'ny lehibe ka hatramin'ny kely, manana ny fahaizany manamboatra lakozia sy ampahany amin'ny Cooker amin'ny habe rehetra izahay, manomboka amin'ny wok mankany amin'ny mpanamboatra Hamburger ho an'ny lakozia sy kojakoja Cooker.
Izahay ITAF 16949 voamarina ary afaka manome ampahany amin'ny famokarana ho an'ny miaramila sy ny telecom fampiharana.
Manamora sy mandrindra ny famokarana ny teknolojia misy anay. Ny haitao misy antsika dia misy ny AutoCAD, Pro-E, MAGMAsoft®, ny CAD / CAM ary ny mifanentana amin'ny EDI, ary ny FARO Laser Scanning.
3. Serivisy fanamboarana hafa ho an'ny lakozia sy kojakoja amin'ny Cooker manokana
Ho fanampin'izany, Minghe dia manome ny masinina CNC, fanodinam-bola, fanariana fasika ary serivisy hafa mifandraika amin'ny lakozia sy faritra Cooker namboarina.
Cnc milina fanaovana lakozia sy lakozia
Fitaovana fanariana lakozia sy kojakojan-dakozia
Fitaovana fantsom-pako an-fasika sy fantsom-pako
4.Ny fahaizan'ny famokarana mazava ho an'ny lakozia sy kojakojan-dakozia
Fitaovana fanariana maty ho an'ny lakozia sy kojakoja amin'ny Cooker:
AL360, AL380, AL383, ary AL413, ZA-8, ZA-12, ZA-27, Aluminium A356,
Mainty, fotsy, volafotsy, mena, voajanahary, manga, maintso ary samy hafa ny lokon'ny mpanjifa
Ny fahaizan'ny famitana ny lakozia sy ny lakozia:
Fitaovana fanamboarana lakozia sy lakozia isan-karazany:
Fanariana maty, famokarana bobongolo, fikosoham-bary CNC, fihodinana CNC, fandavahana CNC
Machines vita amin'ny lakozia sy kojakoja vita amin'ny lakozia ary maty novolavola fampiharana:
Hamburger Maker; Pan-multi-fampiasana;
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny lakozia sy ny fitaovana fanariana Cooker
Safidio ny serivisy fanamboarana lakozia sy Cooker tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny kojakojan-dakozia sy ny fandrahoana ho an'ny lakozia dia aondrana any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom serivisy maty casting china manome filaharana mateza sy mora vidy mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny vahoakanay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fanariana lakozia sy fandrahoan-tsakafo.